Ho fampitomboana ny hetra : mila ambara ny marina amin’ny vola miditra | NewsMada
Nanao atrikasa ny mpiasan’ny hetra, omaly teny Anosy Avaratra. Tompon’andraikitra samihafa manerana ny Nosy, miisa 400 nandray anjara niara-nidinika sy nifanakalo traikefa hanatsarana ny fidiran-ketra. Nitarika ny fotoana ny minisitra Rakotoarimanana Gervais sy ny talen’ny jeneralin’ny hetra, Rajoelison Liva. “Mila hampitomboana ny hetra miditra raha zahana ny hôpitaly, fampianarana, lalana, fotodrafitrasa isan-karazany”, hoy ny minisitra Rakotoarimanana Gervais. Hahatontosana izany ny vola miditra amin’ny fanjakana, indrindra ny fanaraha-maso ny fampidiran-ketra. Ezaka maika koa ny fisarihana ireo “informel” ho anatin’ny “formel”. “Tsy rariny raha misy mampidi-bola tsy mandoa hetra mahazo tombontsoa avy amin’ny hetra aloan’ny hafa”, hoy ny minisitra.
1.552.251 miliara Ar ny hetra niditra ny taona 2015. Tanjona amin’ity taona ity, 1.898 miliara Ar amin’ny alalan’ny tetikasa maro, indrindra eo amin’ny fanaraha-maso, mila ambara ny marina amin’ny vola miditra. Fiarovana ny hetra miditra, amin’ny fandrotsahana ny vola any amin’ny banky, amin’ny finday hanampiana ireo sokajin’olona madinika mpandoa hetra. Ny fitakiana ireo trosa tany aloha ; fanatonana bebe kokoa ny mpandoa hetra.
Anisan’ny fepetra noraisina koa, ny fizahana akaiky ny fomba fiasa amin’ny fanaraha-maso ; fanofanana manokana ireo mpiasa 200 noraisina tamin’ny taona 2015 ; famolavolana lalàna momba ny hetra natao ny desambra 2015. Raha fintinina, araka ny tanjona napetraky ny minisitera : mangarahara, fanajana ny asa, finiavana, ady amin’ny kolikoly.
Fepetra iray hafa, ny fametrahana any amin’ny orinasa sy tranombarotra sasany ireo fitaovana (500 contrôleurs de vente sy 250 caisses enregistreuses) hahafantarana ny TVA sy ny hetra tokony haloan’ireny orinasa ireny. Vokatry ny fiaraha-miasan’i Japana sy Madagasikara izany, fepetra takin’ireo mpamatsy vola ireo. Tsy mampazoto ny olom-pirenena koa anefa raha ny fitondrana mandany ny volam-bahoaka amin’ny tsy misy dikany.